Shir looga hadlayo amniga Soomaaliya oo ka furmay Kismaayo.
KISMAAYO, Soomaaliya - Shir ballaaran oo looga hadlayo amniga guud ee dalka Soomaaliya ayaa ka furmay magaalada Kismaayo, ee xarunta KMG ee dowlad goboleedka Jubbaland.
Cabdirashiid Xasan Nuur "Janan", wasiirka amniga Jubbaland ayaa xaqiijiyay in Shirka uu daah-furay wasiirka amniga Xukuumada Federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaalle.
Waxaa sidoo kale kulan lagu casuumay Wasiiradda amniga maamul goboleedyada dalka, waxaana looga hadlayaa sidoo la isaga kaashan lahaa sugida amaanka Soomaaliya, iyo sidii la isaga kaashan lahaa la dagaalanka Al Shabaab.
Inta uu socdo Shirkan waxay madaxda isla eegi doonaan qaabka ugu wanaagsan ee loo wajaho Al Shabaab, islamarkaana mas'uuliyadda amniga loogu wada shaqeyn lahaa, maadamaa AMISOM ka bixitaankeeda Soomaaliya uu billaabanayo Dec 31, 2017.
Waxaa la filayaa in gaba-gabada Kulanka ay sooo waaraan Wasiirada amniga qodobada ay ku heshiiyeen ee dhinac amniga ku saabsan, iyadoo dhaqan-gelintiisana loo saari doono Gudi ka shaqeeya, sida illo ku sugan Kismaayo ay u sheegeen GO.
Xiisadda Villa Somalia iyo maamullada dalka aya cirka isku shareertay wixii ka dambeeyay 2018.
Al-Shabaab iyo Ciidanka Jubaland oo ku dagaalamay Kulbiyow
Soomaliya 03.06.2018. 23:01
Jubaland oo shaacisay fariinta ay u dhiibtay guddi ka socda Aqalka Hoose
Soomaliya 31.10.2019. 20:38
Jubbaland oo ka hadashay eedeymaha Qadar ee warbixintii NYT
Soomaliya 24.07.2019. 22:59
Shuruudaha Musharixiinta doorashadda Jubbaland oo la shaaciyey
Soomaliya 18.07.2019. 13:06